इन्धनको मूल्य बृद्धिसँगै बढ्यो हवाई भाडा| Corporate Nepal
फागुन ७, २०७७ शुक्रबार १६:५९
काठमाडौँ । हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीको छाता सङ्गठन वायुसेवा सञ्चालक सङ्घ नेपालले हवाई इन्धनको मूल्य बढेसँगै हवाई भाडामा केही वृद्धि गरेको छ ।
हवाई इन्धनको मूल्य बढेकाले सबै गन्तब्यको उडानमा थोरै मात्रामा हवाई भाडादर वृद्धि गरिएको सङ्घका प्रवक्ता योगराज कँडेल शर्माले बताए । उनका अनुसार हवाई इन्धनको मूल्य बढेअनुरुप सबैभन्दा लामो गन्तब्य अर्थात् काठमाडौँ-धनगढीका लागि रु. ९० बढेको छ । काठमाडौँबाट सबैभन्दा नजिकको गन्तब्यमा न्यूनतम रु. १० वृद्धि गरिएको छ भने काठमाडौँबाट हुने पर्वतीय उडानमा रु. ७० बढेको छ ।